महिनावारी अनियमित हुन्छ ? नियमित गराउन गर्नुस् यी घरेलु ५ उपायहरु - IAUA
महिनावारी अनियमित हुन्छ ? नियमित गराउन गर्नुस् यी घरेलु ५ उपायहरु
ramkrishna October 19, 2017	महिनावारी अनियमित हुन्छ ? नियमित गराउन गर्नुस् यी घरेलु ५ उपायहरु
अनियमित महिनावारीलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘ओलिगोमेनोरिया’ भनिन्छ, जुन अधिकांश महिलाहरूका लागि साझा समस्या बन्दै आएको छ।
Previous Previous post: बच्चाहरुको हाइट बढाउन यस्ता खानेकुराहरु खुवाउनुहोस्
Next Next post: ३० मिनेटको पैदल यात्राले प्रारम्भिक मृत्युलाई रोक्न सक्छ